Ndị ọrụ - Educationlọ Ọrụ Mmụta Asụsụ abụọ
Anyị abanyela akpụkpọ ụkwụ nwata akwụkwọ anyị. Anyị maara ihe ọ ga-ewe iji gbanwee ma tinye ọnụ na ibi na mba ọhụrụ, obodo ọhụrụ. N'ihi nke a, ị ga-ahụ ndị ọrụ na ngalaba anyị na-aga n'ihu na-enye ọrụ nkwado. Ee, uche anyị bụ mmụta, mana anyị na-echekwa gbasara mmadụ niile - ebee ka ha ga-ebi, kedụ ebe ha ga-eri nri, kedu ka ha ga-esi mepụta obodo nke ha? Anyị chọrọ ka BEI bụrụ ndọtị nke ụlọ.
Na BEI, anyị bụ ezinụlọ. Anyị na-agbasi mbọ ike ịtọ ihe nlere anya site na nkwanye ùgwù na mmekọrịta mmekọrịta anyị na-aga agụmakwụkwọ ebe a na BEI.
N'agbanyeghị ọdịiche ndị anyị pụrụ iche, anyị na-emekọ ihe ọnụ kwa ụbọchị.
Na ndị ọrụ, anyị nwere ndị ọrụ na-anọchite anya obodo na ọdịbendị si n'akụkụ ụwa niile. Anyị ọnụ, anyị na-eme ka ndị America, Bosnian, Burmese, Congo, Croatian, Cuban, Egypt, Honduran, Iraq, Mexico, Pakistani, Puerto Rican, Russian, Tunisia, na Vietnamese niile. Dị ka nnukwu obodo anyị, BEI dị iche iche.
N'ime obi ya, BEI bụ Houston.
Anyị bụ obodo ọhụrụ - na-emekọ ọnụ ma na-emekọrịta ihe ọnụ.
Nnọọ na tolọ Akwụkwọ Nkụzi Asụsụ.
Ndị ọrụ anyị bụ:
N'akọtara, anyị na-asụ ihe karịrị asụsụ iri na ise
Ọnụ, anyị na-anọchite anya ihe karịrị mba iri na ise.
Anyị na-ewetara mkpokọta ahụmihe karịa iri afọ iri.
Muta ihe banyere BeI site na ndi mmadu mara ya nke oma, na aka ha.
Kedu ihe bụ ihe ncheta BEI kachasị amasị gị?
Isnye bụ nwa akwụkwọ gị kachasị echefu echefu?
Kedu ka ndị ọrụ ibe gị si agbanwe?
Kedu ihe mere ị ga - eji họrọ BEI?
“Otu n’ime ncheta kachasị mma m nwere bụ ememme ụbọchị inye ekele. Ọ bụ otu izu ahụ ka m sonyeere BEI, ọ theụ, obi ụtọ na ọdịnala ezinụlọ masịrị m. So ụmụ akwụkwọ si n'akụkụ ụwa niile na-eme ememme mgbe ha na-eri nri ehihie mara mma na nnukwu nri ọdịnala si mba dị iche iche, na ịmụ banyere ọdịbendị ụmụ akwụkwọ students ọ bụ ihe ịtụnanya.
Meriem Bouziri, Director nke ntinye aha, Ahịa & Nkwukọrịta
Ncheta ọ bụla ebe a na BEI bụ ọkacha mmasị m. Rụ ọrụ na BEI dị ka ezinụlọ, ị ga-amata ma baa ọgaranya na ndụ gị site na mmekọrịta gị na ndị ọrụ dị otu a. ”
Ceasar Santiago, Onye Nchịkọba Ihe Mmemme
“Studentsmụ akwụkwọ m kachasị echefu echere soro anyị na klas ha site na ọkwa ala ha ruo n'ogo ha kacha elu. Ha nwere ike bụrụ ụmụ akwụkwọ kacha okenye n'ụlọ akwụkwọ anyị. Mgbe ha dị afọ iri asaa (iri asaa na asaa), ha kwesiri ịla ezumike nká ma nwee obi ụtọ na ndụ ha. Agbanyeghị, ha siri ụzọ dị anya bịa America iji mezuo nrọ ha. Enwere m onwe m mmasị na ha nke ukwuu n'ihi nchekwube na ịnụ ọkụ n'obi ha ka ha na-eme mgbanwe na gburugburu ebe obibi ọhụrụ, na njikere ha iche ihe ịma aka nke ịmụ Bekee n'oge ha. Ahụrụ m ka ha na-agbasi mbọ ike ikwu okwu na ịmụ Bekee na mbido, mana ahụkwara m ka ha na-eme nke ọma tupu ha ahapụ BEI. Ha bụ ụmụ akwụkwọ nlereanya ahụ echefughị ​​m n'obi m. ”
Thanh Nguyen, Onye Njikwa Ego
“Echetara m otu di na nwunye si Cuba, ndị ji efu Bekee bịa Houston. Agbanyeghị, ha abụọ malitere ịrụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ na-asụ Spanish dị ka ndị nọọsụ (ha na-abụbu ndị dọkịta na mba ha). Ha ga-arụ ọrụ n'ehihie ma na-aga klas m kwa ụbọchị site na 7-9 kwa mgbede. Amaghị m ebe ha nọ ugbu a na etu ha si eme, mana echetere m etu ha si nwee obi ume ala na ịnụ ọkụ n'obi ịmụ asụsụ bekee na ịnata akwụkwọ ikike dibịa bekee ha na Steeti. Agbanyeghị na m nọ na nchịkwa kemgbe 2010, m ka na-ahụ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ mara mma na-anọ n'obi m n'ihi na ha na-eche banyere anyị, na-agwa anyị okwu, na-ekerịta echiche na mmetụta ha, na-ekerịta nri, na ọtụtụ ndị ọzọ! ”
Luba Nesterova, Onye isi akwukwo nke usoro akwukwo na nkuzi
“Nwa akwụkwọ m kachasị echezọ bụ nwa akwụkwọ gara aga nke kpuru ìsì. O kpebisiri ike na ọ ga-amụ Bekee ma na-abịa klas kwa oge maka klas dị iche iche. Ọ gara n'ihu na BEI mgbe ọ gụchara klas ndị ọzọ niile ma debanye aha ya na klas ụmụ amaala. Mgbe akụkọ ahụ bịakwutere m na ọ gafere ule ụmụ amaala, ọ bụ nnukwu ọ joyụ ịhụ ụmụ akwụkwọ ahụ ka ọ na-agabiga usoro ahụ dum ma mezuo ebumnuche ya n'agbanyeghị nkwarụ ya. Akụkọ ya bụ ihe BEI nọchiri anya - ike site na agụmakwụkwọ. "
“Wezọ anyị si elekọta. Nlekọta ka mma, ka ị na-arụ ọrụ nke ọma ma na-arụ ọrụ nke ọma, na-elekọta na-asọmpi na iche iche. Mmụta bụ ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọdịmma mmadụ - nke kachasị mgbanwe, mmiri, na mgbanwe. Ọ na-enye anyị niile ohere ị ga - eji mee ihe dị iche kwa ụbọchị na kwa. Ọ dị m ka ndị mụ na ha na-arụkọ ọrụ na-eme ihe dị iche mgbe ha mebiri iwu ọdịnala, na -ekere òkè otu anyị nwere ike isi melite ma ọ bụ ịnwale ihe dị iche. Ha na - eme ihe dị iche mgbe ha na - agba mbọ maka mmepe ọkachamara ha mgbe ha na - eme ka ọrụ ha dị kwa ụbọchị bụrụ enyi na mmadụ. Ahụrụ m ndị ọhụụ n'anya bụ ndị na-eweta echiche ọhụrụ ma gbanwee echiche ọdịnala anyị na omume na atumatu anyị ugbu a. Enwere m mmasị n'ịmụta site n'aka ndị ọzọ ma na-eme ọganiihu ha. Nke ahụ bụ otú onye ọ bụla n'ime anyị si eme ihe dị iche maka onwe ya, maka ụlọ akwụkwọ, yana nke kachasị mkpa - maka ụmụ akwụkwọ anyị. ”
Luba Nesterova, Onye Nduzi nke Usoro Ọmụmụ na Ntụziaka
“Ndị ọrụ ibe m na-agbanwe ihe kwa ụbọchị ma n’azụ ọfịs ma ọ bụ n’ihu tebụl na-enyere aka, na-eduzi ma na-enye ụmụ akwụkwọ ndụmọdụ ugbu a, ndị ọdịnihu, na / ma ọ bụ ndị gara aga iji mezuo ebumnuche ha n'ịmụ asụsụ bekee. Ndị ọrụ BEI na-anya isi na ọ joyụ na ịme mgbanwe na ndụ ụmụ akwụkwọ niile. Ndị ọrụ dị iche iche dị iche iche na-atụnye ụtụ na nghọta dị mkpa nke Bekee dị ka onye na-asụ asụsụ ala ọzọ. ”
“Nweta. M na-anụkarị na anyị pụrụ iche na ụmụ akwụkwọ nwere ike iwulite ntụkwasị obi na mmekọrịta anyị na ndị otu anyị. Anyị na-enweta ma dị mfe mbịakwute - nke a na-enyere ụmụ akwụkwọ aka were were were na obi ike, mana ọtụtụ n'ime anyị nọ ebe a iji nyere aka na ụmụ akwụkwọ anyị na-anabata gị mgbe niile ịbịakwute anyị maka ihe ọ bụla
Keri Lippe, Onye isi akwukwo
“Ebumnuche BEI na ọhụụ bụ ihe na - akpali m - na anyị bụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na - eji nganga eme ihe. BEI ji nsonye, ​​itinye aka, na onyinye nke ụmụ akwụkwọ ya niile n'obodo. Isi ọrụ ya na-eme ka m na-abịa ọrụ ụbọchị ọ bụla jupụtara na nganga na mkpali.
“Achọrọ m ịrụ ọrụ maka BEI n'ihi ọdịbendị ụlọ ọrụ. Ọ bụ ọdịnala ezinụlọ, enweghị m otu ebe a, yabụ ha aghọọla ezinụlọ m. BEI nwere ikike buru ibu, yana nnukwu ebumnuche. Anyị na-enyere ndị mmadụ aka, anyị na-agbanwekwa ndụ ha ka ọ ka mma. Amụ asụsụ na omenaala ọhụrụ ga-eme ka a hụ ọhụụ, na-enye gị mkpịsị ugodi iji nwee ihe ịga nke ọma. ”
Meriem Bouziri, Onye isi nduzi - Ndenye aha, Ahịa & Nkwukọrịta
“E nwere ọtụtụ ihe kpatara ya, mana ọ bụrụ na m na-eche maka isi ihe kpatara ya, ọ nwere ike bụrụ ohere iji nwee ọdịiche dị na mkpụrụ ego. Akpọrọ m ọrụ ọrụ oge ọ bụla asị, ọrụ m na BEI abụbeghị nke a na-eme mgbe niile! Dịka ụlọ ọrụ nke onwe, anyị enweghị nnukwu ụlọ ọrụ na-agafe agafe na mmejuputa echiche na ọrụ ọhụụ. Anyị na-anwale, anyị na-anwale, anyị na-agbanwe oge niile. ”